तुलसीपुरमा खुट्टा छिनिने गरि आक्रमण गर्ने दुई जना सार्वजनिक « Daily News Bank
तुलसीपुरमा खुट्टा छिनिने गरि आक्रमण गर्ने दुई जना सार्वजनिक
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ नवलपुर निवासी ४५ बर्षीय कुमार विकको बाँया खुट्टा छुटिने गरि भएको आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरि सार्वजनिक गरिएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरि हत्यामा संलग्न भएको अरोपमा दुईजनालाई सार्वजनिक गरेको हो ।
घटनामा ११ जनाको संलग्न भएता पनि अन्य चार जना फरार रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपापिलका वडा नं. १४ निवासी २२ बर्षीय विजय चौधरी, सोही ठाउँका २३ बर्षीय अशोक चौधरी, १८ बर्षीय तिलक चौधरी, २१ बर्षीय सुनिल चौधरी, २८ बर्षीय पवन चौधरी र १९ बर्षीय आशिष चौधरी रहेका छन् । पक्राउ परेकाहरुमध्ये पवन चौधरी दुबै घटनामा संलग्न भएको पाईएको छ । नाचगान गर्ने क्रममा उत्पन्न विवादले नै यी दुई घटना निम्त्याएको प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंहले बताए । एक घण्टाको फरकमा यी दुई घटना भएका थिए । आसपासमा प्रहरी चौकी नहुँदा पनि त्यस स्थानमा अपराधिक गतिबिधिहरु बढिरहेको प्रहरीले जनाएकाे छ ।